Mmiri na-ese n'elu mmiri sooks Factory, Suppliers - China Marine floating sooks Manufacturers
Mwube & Ihe Isi Nnukwu anụ ozu / tube dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na ExtrudedAcrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi linig; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Cover: Black Syntetic Rubber Ezigbo mmanụ na-eguzogide ọgwụ. Single ozu na Double Carcass sere n'elu Materia ...
Ọkara sere n'elu sooks na One End mkwado
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi ihe; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Cover: Black Syntetic Rubber Ezigbo mmanụ na mmanụ ụgbọala na-eguzogide ọgwụ. Single ozu na Double Carcass ise n'elu ...
Tanker Rail sere n'elu sooks
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi ihe; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Cover: Black Syntetic Rubber Ezigbo mmanụ na mmanụ ụgbọala na-eguzogide ọgwụ. Single ozu na Ugboro abụọ anu ulo Floa ...
Tail sere n'elu sooks
Mbelata sere n'elu sooks
Mwube & Ihe Akụrụngwa Isi ozuzu na eriri dị n'ime: Ezigbo, mmanụ na mmanụ na-eguzogide ọgwụ dị ọcha na-enweghị ntụpọ na Extruded Acrylontrile-Butadiene-Rubber (NBR); Mkpuchi Nchedo: ihe owuwu pụrụ iche iji gbochie ntụpọ ma ọ bụ mmebi nke na-adọka ma ọ bụ na-emebi emebi nke isi linig; Ndozi: Otutu Plies nke High Tensile Textile ụdọ. Otu agbakwunyere helical Isi ígwè waya. Cover: Black Syntetic Rubber Ezigbo mmanụ na mmanụ ụgbọala na-eguzogide ọgwụ. Ihe na-ese n'elu mmiri: Fofụfụ mechiri emechi. Ou ...